Maxaynu Gogosha Cusub ugu Gam'i Weynaa? - Daryeel Magazine
Maxaynu Gogosha Cusub ugu Gam’i Weynaa?
Barnaamijkeenaan waxeynu ku eegaynaa sababta aynu badanaa hore ugu gam’i weyno marka aynu ku seexanno gogol aan teenii ahayn.
Waxaa suurogal caadiyan inay hurdadu inagga xumaato habeenka ugu horreeya ee aynu ku seexanno gogol uu leehay qof kale oo aad deegaankiisii ugu hoyatay balse cilmi baadhisyo laga sameeyay arrinkaa waxa ay cadaynayaan in sababtaasi aanay ahayn gogosha uu qofkaasii kugu seexiyay laakiin mushkiladdu ay tahay dhankaaga gaar ahaan maskaxdaada.
Daraasad cusub oo ay samaysay jaamacadda Brown ee ku taal wadanka mareykanka ayaa sheegaysa in marka aad ku jiifsato gogoshan aadan hore ula qabsan ay macnaheedu tahay inaad madaxaagii dhigtay aanun garanayn xilligaasina waa marka ay qeybta bidix ee maskaxdaadu bilaabayso shaqadii ay haysay iyadoo isu beddelaysa sidii aalad yar oo ilaalo ka haynaysa la socodka wax kasta oo habeenkaa dhacaya. Qeybta bidix ee maskaxdaadu waxa ay habeenkaa oo dhan ku jiraysaa xaaladaa warwarka ah waana waqtigii aad adigu isku deyaysay inaad gam’ado oo seexato iyadoo qeybta midig ee maskaxdaaduna la yaaban tahay qeybta bidix.
Nasiib wanaagsan heshiis la’aanta labada qeybood ee maskaxdaadu iyo hurdo xumada ka dhalata waxa ay ku kooban yihiin uu qura habeenka ee aad gogol aadan la qabsan ku seexato, iyadoo xaaladu habeennada ku xiga caadi kusoo noqonaysoo oo laga yaabo inaad u seexato sidii ilmo yar oo xilligii nuujinta ku jira.
Qaab Jiifka Xilliga Uurka Adeeg Cusub Oo Lagu Soo Kordhiyay Taleefoonada Casriga Ah Oo Qofka Ka Caawinaya In Aanu Ku Hurdo Seegin Cudurrada Cusub Ee Laga Qaado Taleefoonnada Casriga Ah Iyo Internet-ka Qaabab Cusub Oo La Iskaga Ilaalin Karo Cudurka Macaanka Nooca Labaad (Type 2 Diabetes)